မွေးကတည်းက လူတိုင်းကို တင်းကြပ်စွာ ဇာတ်ခွဲခြားစနစ်ကျင့်သုံးထားတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား . - Barnyar Barnyar
မွေးကတည်းက လူတိုင်းကို တင်းကြပ်စွာ ဇာတ်ခွဲခြားစနစ်ကျင့်သုံးထားတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား .
သိုဝှက်တဲ့ အထီးကျန် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက လျှို့ဝှက်ယူနစ် အဖွဲ့တစ်ရပ်ကို ကျွန်တော်တို့တွေ မကြာသေးခင်က ခဏတစ်ဖြုတ် တွေ့လိုက်ကြပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားမြေကို ပထမဆုံး စနင်းတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဧပြီလအတွင်း သမိုင်းဝင်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက် ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံးအွန် ရောက်ရှိလာစဉ်က ကင်ဂျုံးအွန် ကားကို ၀ိုင်းရံပြီး ထပ်ကြပ်ပြေးလိုက်ကာ ခြံရံခဲ့တဲ့ သက်တော်စောင့်အဖွဲ့ပါပဲ။
မြို့ပြတိုက်ပွဲတွေမှာ ရန်သူထက် နှာတစ်ဖျားအသာရမယ့် နတ်မျက်စိနည်းပညာ ဗြိတိန် တီထွင်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး လာရောက်ချိန်မှ မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ အရပ်မြင့်မြင့်မားမားနဲ့ ကင်ဂျုံးအွန် သက်တော်စောင့်တွေဟာ မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ရဲ့ အမြင့်ဆုံး အထက်တန်းတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ အထူးအစောင့်တပ်မကပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သက်တော်စောင့်ရာထူးအဆင့်ကတော့ ဒီအထူးအစောင့်တပ်မရဲ့ အတွင်းစည်းက ရာထူးအဆင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်မှာ အထူးအစောင့်တပ်မက အရွေးခံရပြီး လက်ရှိ တောင်ကိုရီးယားမှာ ချွင်မင်းဂျန်ဆိုတဲ့ အမည်တုနဲ့ ပြည်ပြေးတစ်ဦးက အတွင်းစည်းထဲ ၀င်ခွင့်မရတဲ့ ခေါင်းဆောင်ရဲ့ သက်တော်စောင့်ဖြစ်ချင်ခဲ့သူပါ။ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်ရဲ့ သက်တော်စောင့် အတွင်းစည်းတပ်ဖွဲ့မှာ တာဝန်ထမ်းခွင့်ရအောင် ချွင်ဟာ သတ်မှတ် အရပ်အမောင်း ပြည့်မီခြင်း မရှိပါ။ ဒါပေမယ့် သက်တော်စောင့်ဖြစ်ခွင့် မရတာက မှားယွင်းတဲ့ မိသားစု နောက်ခံကြောင့် အဓိကလို့ ချွင်က ဆိုပါတယ်။
“လူမှုအသိုင်းအဝန်းမှာ ကျွန်တော်က အထက်တန်းလွှာအကျဆုံးက မွေးလာသူ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ ကိုယ်ရံတော်သက်တော်စောင့်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းခွင့်မရတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီအစား တိုက်ခိုက်ရေးယူနစ်မှာပဲ အရွေးခံခဲ့ရတယ်။”လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံအဖြစ်ကို ကာကွယ်ရေးအတွက် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ အသေးစိတ်ပြီး တင်းကြပ်တဲ့ ဇာတ်ခွဲစနစ်ကို ကျင့်သုံးထားပါတယ်။ ဒါကတော့ မွေးကတည်းက လူတိုင်းကို အတန်းအစား သတ်မှတ်ထားတာပါ။ Songbun လို့ ခေါ်တဲ့ ဇာတ်ခွဲစနစ်ပါပဲ။
မြောက်ကိုရီးယား ဇာတ်ခွဲစနစ်ကို NKNews သတင်းက “ပြည်သူတွေကို အုပ်စုတွေ ခွဲထားတယ်။ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ဂျပန်ကိုလိုနီ အပြုခံအချိန်နဲ့ ကိုရီးယားစစ်ပွဲကာလမှာ သူတို့ရဲ့ အဖေဖက်က အမျိုးရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို မူတည်ပြီး ခွဲခြားထားတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီ Songbun စနစ်နဲ့ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေ တစ်ခုတည်းသော တည်ရှိရာ မြို့တော်မှာ ဒီလူ နေရ မနေရ၊ ဘယ်လို ပညာရေးသင်ရိုးမျိုး သင်ယူခွင့် ရမရတို့ကို ဖခင်မျိုးရိုးရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ကြည့်ပြီး မွေးကတည်းက ခွဲခြားပိုင်းဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။”လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Songbun စနစ်နဲ့ ဇာတ်ခွဲခံထားရတာကို ပြောင်းလဲပစ်လို့ မရပါဘူး။ တကယ်လို့ အဘိုးဖြစ်တဲ့သူဟာ မြောက်ကိုရီးယားကို ဂျပန်ကျူးကျော်စဉ် တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူဆို မြေးတွေဟာ သစ္စာခံတွေပါ။ ဂျပန်ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်သူတွေအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ သားသမီးမြေးမြစ်တွေဟာ ရန်သူတော်စာရင်းမှာ အမြဲတမ်း ထည့်သွင်းထားခံရတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချွင်ရဲ့ မိသားစုတွေကတော့ ဆင်းရဲသားတောင်သူလယ်သမားတွေပါ။ ဂျပန်အတွက်လည်း အမှုမထမ်းခဲ့သလို ဆန့်ကျင်တာလည်း မရှိခဲ့ကြသူတွေပါ။ ဒီအတွက် ချွင်ဟာ တိုက်ခိုက်ရေးယူနစ်ကိုပဲ အပို့ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“မြောက်ကိုရီးယားမှာဆို ခင်ဗျားဟာ အရွယ်ငယ်ငယ်လေးမှာပဲ ဦးနှောက်ဆေးတာ ခံရမှာ။ ကျွန်တော်လည်း ခေါင်းဆောင် ကင် မိသားစုက ဘုရားသခင်တွေပဲလို့ ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါကို ကျွန်တော် ယုံလည်း ယုံနေခဲ့တယ်။”လို့ ချွင်က ဆိုပါတယ်။
Read More မြန်မာပြည်တောင်ဘက် ကပ္ပလီကျွန်းစုရှိ ကမ္ဘာနဲ့အဆက်ပြတ်နေတဲ့ လူမျိုးစု“နှစ်သစ်ကူးမှာ ကင်အီဆွန်းက မိန့်ခွန်းပြောတော့ ဒီနှစ် ကျောက်မီးသွေးတွေ ပိုတူးကြမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒီမှာ ကျွန်တော်ဟာ ကိုယ်ကိုကို ပြောတယ်။ ငါ မိုင်းတွင်းတွေဆီသွားမယ်။ မိုင်းတူးမယ်ပေါ့။ ဒါဟာ ကျွန်တော် ဘယ်လောက်အထိ ကင်မိသားစုအပေါ် သစ္စာစောင့်သိနေမိခဲ့သလဲဆိုတာ ပြနေတာပဲ။”
အထူးအစောင့်တပ်မနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချွင်က ပြောရာမှာ ဒီတပ်ဟာ ပြည်ပရန်သူတွေကနေ ကင်မိသားစုကို ကာကွယ်ဖို့ မဟုတ်ကြောင်း၊ သူတို့ အတွင်းစည်းက ရန်ကိုပဲ ကာကွယ်ဖို့ ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
“ကင်မိသားစုအတွက်ကတော့ လူတိုင်းဟာ ရန်သူတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်၊ စစ်ဌာနချုပ်၊ စစ်ဝန်ကြီးရုံးအပြင် တစ်နိုင်ငံလုံးက မြောက်ကိုရီးယား ပြည်သူတွေဟာ သူတို့အတွက် ရန်သူတွေ ဖြစ်နေနိုင်တယ်။”လို့ ချွင်က ပြောပါတယ်။
ချွင်မှာလည်း ဘယ်သူကိုမှ မယုံအောင်၊ မိဘကိုတောင် မယုံအောင် ရိုက်သွင်းခံရပါတယ်။
Read More ကမ္ဘာ့ အလုံခြုံဆုံးကား ( သို့ ) သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့် စီးတော်ယာဉ်၏ အံ့အားသင့်ဖွယ်အချက်များကင်မိသားစုရဲ့ အကြောက်တရား ကြီးထွားလာခြင်းကြောင့်လည်း ကိုယ်ရံတော်သက်တော်စောင့်တပ်ဖွဲ့ဟာ အရွယ်အစား ပိုကြီးလာတော့တယ်။
“အရှေ့အုပ်စု ပြိုလဲတာ၊ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ပြိုကွဲတာတွေ ကင်မိသားစု အသိုင်းအဝိုင်း မြင်လိုက်ရချိန်မှာ သူတို့တွေ ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်သွားကြတယ်။ အထူးအစောင့်တပ်ရဲ့ အင်အားအရွယ်အစားကို ချဲ့ထွင်တော့တာပဲ။ ခုဆိုရင် စစ်သား ၁၂၀၀၀၀ နီးပါး ဒီတပ်ဖွဲ့မှာ အင်အားရှိနေတယ်။”လို့ ချွင်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
မောင်သံဆင့် ( XYZ News )
မှေးကတညျးက လူတိုငျးကို တငျးကွပျစှာ ဇာတျခှဲခွားစနဈကငျြ့သုံးထားတဲ့ မွောကျကိုရီးယား
သိုဝှကျတဲ့ အထီးကနျြ မွောကျကိုရီးယားနိုငျငံက လြှို့ဝှကျယူနဈ အဖှဲ့တဈရပျကို ကြှနျတျောတို့တှေ မကွာသေးခငျက ခဏတဈဖွုတျ တှလေို့ကျကွပါတယျ။ တောငျကိုရီးယားမွကေို ပထမဆုံး စနငျးတဲ့ မွောကျကိုရီးယား ခေါငျးဆောငျအဖွဈ ဧပွီလအတှငျး သမိုငျးဝငျထိပျသီးအစညျးအဝေးအတှကျ ခေါငျးဆောငျ ကငျဂြုံးအှနျ ရောကျရှိလာစဉျက ကငျဂြုံးအှနျ ကားကို ဝိုငျးရံပွီး ထပျကွပျပွေးလိုကျကာ ခွံရံခဲ့တဲ့ သကျတျောစောငျ့အဖှဲ့ပါပဲ။
Read More မွို့ပွတိုကျပှဲတှမှော ရနျသူထကျ နှာတဈဖြားအသာရမယျ့ နတျမကျြစိနညျးပညာ ဗွိတိနျ တီထှငျထိပျသီးအစညျးအဝေး လာရောကျခြိနျမှ မွငျတှလေို့ကျရတဲ့ အရပျမွငျ့မွငျ့မားမားနဲ့ ကငျဂြုံးအှနျ သကျတျောစောငျ့တှဟော မွောကျကိုရီးယားစဈတပျရဲ့ အမွငျ့ဆုံး အထကျတနျးတပျဖှဲ့ဖွဈတဲ့ အထူးအစောငျ့တပျမကပဲ ဖွဈကွပါတယျ။ သကျတျောစောငျ့ရာထူးအဆငျ့ကတော့ ဒီအထူးအစောငျ့တပျမရဲ့ အတှငျးစညျးက ရာထူးအဆငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။အသကျ ၁၄ နှဈအရှယျမှာ အထူးအစောငျ့တပျမက အရှေးခံရပွီး လကျရှိ တောငျကိုရီးယားမှာ ခြှငျမငျးဂနျြဆိုတဲ့ အမညျတုနဲ့ ပွညျပွေးတဈဦးက အတှငျးစညျးထဲ ဝငျခှငျ့မရတဲ့ ခေါငျးဆောငျရဲ့ သကျတျောစောငျ့ဖွဈခငျြခဲ့သူပါ။
မွောကျကိုရီးယား ခေါငျးဆောငျရဲ့ သကျတျောစောငျ့ အတှငျးစညျးတပျဖှဲ့မှာ တာဝနျထမျးခှငျ့ရအောငျ ခြှငျဟာ သတျမှတျ အရပျအမောငျး ပွညျ့မီခွငျး မရှိပါ။ ဒါပမေယျ့ သကျတျောစောငျ့ဖွဈခှငျ့ မရတာက မှားယှငျးတဲ့ မိသားစု နောကျခံကွောငျ့ အဓိကလို့ ခြှငျက ဆိုပါတယျ။
“လူမှုအသိုငျးအဝနျးမှာ ကြှနျတျောက အထကျတနျးလှာအကဆြုံးက မှေးလာသူ မဟုတျဘူး။ ဒါကွောငျ့ ခေါငျးဆောငျကွီးရဲ့ ကိုယျရံတျောသကျတျောစောငျ့အဖွဈ တာဝနျထမျးခှငျ့မရတာ ဖွဈတယျ။ ဒီအစား တိုကျခိုကျရေးယူနဈမှာပဲ အရှေးခံခဲ့ရတယျ။”လို့ ဆိုပါတယျ။
ဆိုရှယျလဈနိုငျငံအဖွဈကို ကာကှယျရေးအတှကျ မွောကျကိုရီးယားနိုငျငံဟာ အသေးစိတျပွီး တငျးကွပျတဲ့ ဇာတျခှဲစနဈကို ကငျြ့သုံးထားပါတယျ။ ဒါကတော့ မှေးကတညျးက လူတိုငျးကို အတနျးအစား သတျမှတျထားတာပါ။ Songbun လို့ ချေါတဲ့ ဇာတျခှဲစနဈပါပဲ။
မွောကျကိုရီးယား ဇာတျခှဲစနဈကို NKNews သတငျးက “ပွညျသူတှကေို အုပျစုတှေ ခှဲထားတယျ။ ဘယျလိုလဲဆိုတော့ ဂပြနျကိုလိုနီ အပွုခံအခြိနျနဲ့ ကိုရီးယားစဈပှဲကာလမှာ သူတို့ရဲ့ အဖဖေကျက အမြိုးရဲ့ လုပျရပျတှကေို မူတညျပွီး ခှဲခွားထားတာ ဖွဈတယျ။ ဒီ Songbun စနဈနဲ့ လုပျငနျးကိုငျငနျးတှေ တဈခုတညျးသော တညျရှိရာ မွို့တျောမှာ ဒီလူ နရေ မနရေ၊ ဘယျလို ပညာရေးသငျရိုးမြိုး သငျယူခှငျ့ ရမရတို့ကို ဖခငျမြိုးရိုးရဲ့ လုပျရပျကို ကွညျ့ပွီး မှေးကတညျးက ခှဲခွားပိုငျးဖွတျထားတာဖွဈပါတယျ။”လို့ ဖျောပွထားပါတယျ။
Songbun စနဈနဲ့ ဇာတျခှဲခံထားရတာကို ပွောငျးလဲပဈလို့ မရပါဘူး။ တကယျလို့ အဘိုးဖွဈတဲ့သူဟာ မွောကျကိုရီးယားကို ဂပြနျကြူးကြျောစဉျ တျောလှနျတိုကျပှဲဝငျခဲ့သူဆို မွေးတှဟော သစ်စာခံတှပေါ။ ဂပြနျကိုလိုနီအုပျခြုပျသူတှအေတှကျ အလုပျလုပျပေးခဲ့တယျဆိုရငျတော့ သူ့ရဲ့ သားသမီးမွေးမွဈတှဟော ရနျသူတျောစာရငျးမှာ အမွဲတမျး ထညျ့သှငျးထားခံရတော့တာ ဖွဈပါတယျ။ ခြှငျရဲ့ မိသားစုတှကေတော့ ဆငျးရဲသားတောငျသူလယျသမားတှပေါ။ ဂပြနျအတှကျလညျး အမှုမထမျးခဲ့သလို ဆနျ့ကငျြတာလညျး မရှိခဲ့ကွသူတှပေါ။ ဒီအတှကျ ခြှငျဟာ တိုကျခိုကျရေးယူနဈကိုပဲ အပို့ခံရတာ ဖွဈပါတယျ။
“မွောကျကိုရီးယားမှာဆို ခငျဗြားဟာ အရှယျငယျငယျလေးမှာပဲ ဦးနှောကျဆေးတာ ခံရမှာ။ ကြှနျတျောလညျး ခေါငျးဆောငျ ကငျ မိသားစုက ဘုရားသခငျတှပေဲလို့ ထငျခဲ့တယျ။ ဒါကို ကြှနျတျော ယုံလညျး ယုံနခေဲ့တယျ။”လို့ ခြှငျက ဆိုပါတယျ။
Read More မွနျမာပွညျတောငျဘကျ ကပ်ပလီကြှနျးစုရှိ ကမ်ဘာနဲ့ အဆကျပွတျနတေဲ့ လူမြိုးစု“နှဈသဈကူးမှာ ကငျအီဆှနျးက မိနျ့ခှနျးပွောတော့ ဒီနှဈ ကြောကျမီးသှေးတှေ ပိုတူးကွမယျလို့ ပွောတယျ။ ဒီမှာ ကြှနျတျောဟာ ကိုယျကိုကို ပွောတယျ။ ငါ မိုငျးတှငျးတှဆေီသှားမယျ။ မိုငျးတူးမယျပေါ့။ ဒါဟာ ကြှနျတျော ဘယျလောကျအထိ ကငျမိသားစုအပျေါ သစ်စာစောငျ့သိနမေိခဲ့သလဲဆိုတာ ပွနတောပဲ။”အထူးအစောငျ့တပျမနဲ့ ပတျသကျပွီး ခြှငျက ပွောရာမှာ ဒီတပျဟာ ပွညျပရနျသူတှကေနေ ကငျမိသားစုကို ကာကှယျဖို့ မဟုတျကွောငျး၊ သူတို့ အတှငျးစညျးက ရနျကိုပဲ ကာကှယျဖို့ ဖွဈကွောငျး ဆိုပါတယျ။
“ကငျမိသားစုအတှကျကတော့ လူတိုငျးဟာ ရနျသူတှေ ဖွဈနိုငျတယျ။ မွောကျကိုရီးယားစဈတပျ၊ စဈဌာနခြုပျ၊ စဈဝနျကွီးရုံးအပွငျ တဈနိုငျငံလုံးက မွောကျကိုရီးယား ပွညျသူတှဟော သူတို့အတှကျ ရနျသူတှေ ဖွဈနနေိုငျတယျ။”လို့ ခြှငျက ပွောပါတယျ။
ခြှငျမှာလညျး ဘယျသူကိုမှ မယုံအောငျ၊ မိဘကိုတောငျ မယုံအောငျ ရိုကျသှငျးခံရပါတယျ။Read More ကမ်ဘာ့အလုံခွုံဆုံးကား ( သို့) သမ်မတဒျေါနယျထရမျ့ စီးတျောယာဉျ၏ အံ့အားသငျ့ဖှယျအခကျြမြားကငျမိသားစုရဲ့ အကွောကျတရား ကွီးထှားလာခွငျးကွောငျ့လညျး ကိုယျရံတျောသကျတျောစောငျ့တပျဖှဲ့ဟာ အရှယျအစား ပိုကွီးလာတော့တယျ။
“အရှအေု့ပျစု ပွိုလဲတာ၊ ဆိုဗီယကျယူနီယံ ပွိုကှဲတာတှေ ကငျမိသားစု အသိုငျးအဝိုငျး မွငျလိုကျရခြိနျမှာ သူတို့တှေ ကွောကျလနျ့တုနျလှုပျသှားကွတယျ။ အထူးအစောငျ့တပျရဲ့ အငျအားအရှယျအစားကို ခြဲ့ထှငျတော့တာပဲ။ ခုဆိုရငျ စဈသား ၁၂၀၀၀၀ နီးပါး ဒီတပျဖှဲ့မှာ အငျအားရှိနတေယျ။”လို့ ခြှငျက ပွောခဲ့ပါတယျ။
မောငျသံဆငျ့ ( XYZ News )
“ သင့် ခေါင်းထဲ အမှိုက်တွေလာသွန်နေတာကို ခွင့်မပြုပါနဲ့ ”